မီးခံနိုင်သောအလူမီနီယံပလပ်စတစ်ပြားသည်နံရံအလှဆင်ခြင်းအတွက်အဆင့်မြင့်မီးခံပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သစ်သားပလတ်စတစ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ အလူမီနီယံပြားနှင့်အထူးမီးလျှံတားဆေးများပါ ၀ င်သည့်ပိုလီမာအီလက်ထရွန်နစ်ပလတ်စတစ်အပိုပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောသစ်သားပေါင်းစပ်ပစ္စည်းသည်ပိုလီမာကော်ကော် (သို့မဟုတ်ပူအရည်ပျော်ကော်) နှင့်ပူသည်။ ၎င်း၏လှပသောအသွင်အပြင်၊ လှပသောဖက်ရှင်၊ မီးဘေးကာကွယ်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ အဆင်ပြေသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြားအားသာချက်များကြောင့်ခေတ်မီကုလားကာနံရံအလှဆင်မှုအတွက်အဆင့်မြင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်တောက်ပသောအနာဂတ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမီးခံနိုင်စွမ်းနှင့်မီးတောက်ဒဏ်ခံနိုင်သည့်အပြင်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၏လောင်ကျွမ်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သတ်မှတ်ထားသော GB8624 စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သောနိုင်ငံအဆင့်အတိအကျကိုကျော်လွန်ပြီး၎င်း၏လောင်ကျွမ်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် B1 အဆင့်ထက်မကျော်လွန်နိုင်ပါ။
GB / t17748 အလူမီနီယံပလပ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှုပြား၏နိုင်ငံတကာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 2. Superior အခွံခွန်အားနှင့်ကောင်းမွန်သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၊
၃။ အဓိကပစ္စည်းဖြစ်စဉ်သည်ခိုင်မာစွာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ အလူမီနီယမ် - ပလပ်စတစ်ပြား၏ extrusion အပြောင်းအလဲနဲ့အခြေအနေကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိလူမီနီယံ - ပလပ်စတစ်ပြားထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏နည်းပညာလမ်းကြောင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။
4. အဓိကပစ္စည်းသည်အပူပေးအောက်စီဂျင်အိုမင်းခြင်းစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပြီးအပူချိန်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ကျခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း - စက်ဘီး ၂၀ အတွက်စက်ဘီး ၂၀ အတွက်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ၊
၅။ အဓိကပစ္စည်းတွင်ပါသောမီးလျှံနှောင့်နှေးမှုသည်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ ရွေ့ပြောင်းမှုနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုမရှိခြင်းနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်မရှိသောသာမန်ဟလိုဂျင်မီးလျှံနှောင့်နှေးမှုများကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်အတွက်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်အလွန်သင့်တော်သည်။ ဗိသုကာအလှဆင်;
6. ထုတ်ကုန်၏အဓိကပစ္စည်းသည်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားအရောင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၇။ အဓိကပစ္စည်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သောမီးလျှံတားဆေးနှင့်သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများ၊ မီးလောင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ မီးလောင်သည့်အခါမီးခိုးပမာဏသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးတောက်ပသောဓာတ်ငွေ့နှင့်မီးခိုးငွေ့လည်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်လေထုညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲစိမ်းလန်းသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပြည်နယ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
နောက်တစ်ခု: Nano မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေသောလူမီနီယံပလပ်စတစ်ပြား